ကို James Mmt-အလွဲများစွာနဲ့အမြဲမမှားစေချင်ပါ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Daw Suu’s words about the Universal Declaration of Human Rights
To Mr James Mmt (Maung Maung Than) with love »
ကျွန်တော် ဦးဘိုကျော်ငြိမ်း ကို ရေးသားခဲ့တဲ့ အထဲမှာ…..မွတ်စလင်တွေဆန္ဒပြနေတဲ့ ပုံတွေ၊ ကလေးငယ် က ခါးမှာ ဗုံးပတ်ထားတဲ့သရုပ်ပုံတွေဟာ “မတရားဖိနှိပ်ညှင်းပန်း ခံနေရလို့ ပေါ်လာတဲ့ ပုံရိပ်တွေပါ။” လို့ဘဲရေးထားတာပါ။ အဲဒီလို တုန့်ပြန်ခြင်းဟာ တရားမျှတ၏ မမျှတ၏ ဘာမှမှတ်ချက်ပေးထားတာမရှိကြောင်း ကို James Mmt ကောင်းကောင်းသိနေလို့လည်း
[[“ဒါဆိုရင် ဒီလို တုံ့ပြန်တာကို တရားတယ်လို့ ဆိုလိုချင်တာလား”]]
လို့မရေမရာ ရေးခဲ့တာဟုတ်သလား မဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျ။ ကျွန်တော့်ဖက်က တရား၏၊ မတရား၏ ဘာမှလည်း မရေးထားဘူး၊ အဲဒီလို မရေးထားမှန်းကို James Mmt ကောင်းကောင်းသိနေတယ်၊ သိနေလို့လည်း ကို James Mmt က “ဆိုလိုချင်တာလား” လို့ ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ် မသေချာလို့ပြန်မေးတယ်၊ အဲဒီလို မေးပြီးတော့ တစ်ခါ
[[“ကလေးသူငယ်တွေကို ဗန်းပြ၊ ခုတုံးလုပ် အသုံးချတာလောက် လူ့ကျင့်ဝတ်မှာ ယုတ်ညံ့တာ မရှိဘူးဆိုတာ နားမလည်နိုင်တာအံ့သြမိတယ်ဗျာ…….”]]
လုပ်တဲ့လုပ်ရပ်တွေ၊ အခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့အပြစ်မဲ့လူသားတွေကို အကြမ်းဖက်တာတွေစတဲ့ လုပ်ရပ်တွေ ကို မှန်ကန်ကြောင်း support လုပ်ရေးထားတာလုံးဝမရှိတဲ့အပြင်”ကျွန်တော့် အနေနဲ့တာလီဘန် တွေကိုထောက်ခံရေးမှာ မဟုတ်သလိုဘင်လာဒင်တို့အဖွဲ့ကိုလည်း ပံ့ပိုးရေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီလို မရေးတာဟာလည်းဘဲ သူတို့ရဲ့လုပ်ရပ်တွေကို လုံးဝဆန့်ကျင်လို့ပါ။ ကျွန်တော် အဲဒီလူဆိုးတွေကို ဆန့်ကျင်ရှုံ့ချရေးပါတယ်။” လို့ ဗြောင်ကျကျ ဆန့်ကျင်ရှုံ့ချ ရေးသားထားတာ အများအမြင်ပါဘဲ။ အဲဒီလို ရေးထားတာကို တောင်မမြင်နိုင်ဘဲ ကျွန်တော့် ကို တစ်ဖက်သတ် အပြစ်တင်ရေးသားလာတဲ့ ကို James Mmt တစ်ယောက် ဘာဇောတွေအကြီး အကျယ်ကပ်နေလို့လဲဆိုတာကိုတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်သာ ဆင်ခြင်ကြည့်ပါဗျာ။
“ဘာလို့အဲလို ရေးလဲ?” “မခံနိုင်ဘူး” ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုး။ ဘာလို့အဲလိုရေးလဲဆိုရင် ရိုးရိုးလေးဘဲ စဉ်းစားကြည့်လေဗျာ၊ ဗာမီယန် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွါးတော် ဖျက်စီးခံရတာကို နှလုံးသားနာကျင်သူတွေ ကမ္ဘာမှာ အရေအတွက်ဘယ်လောက်ရှိမလဲ? ဗလီတွေ ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းတွေ၊ မွတ်စလင်တွေ ခရစ်ယျာန်တွေ မတရား အသတ်ဖြတ်ခံနေရတာကို နှလုံးသားနာကျင်နေသူတွေ အရေအတွက်ဘယ်လောက်ရှိမလဲ? နောက်တစ်ချက်က တာလီဘန်လူယုတ်မာတွေ ဖျက်စီးခဲ့တဲ့ ရုပ်ပွါးတော်တွေက ကိုးကွယ်ရာမဲ့ စံပယ်နေခဲ့တာပါ။ တာလီဘန် တွေကို ကမ္ဘာကမသိခင် က ဘယ်သူကမှ အဲဒီရုပ်ပွါးတော်တွေ အကြောင်းစကားထဲ ထည့်ပြောခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ ဗလီ တွေ ခရစ်ယျာန်ဘုရားကျောင်းတွေကျတော့ အနေအထားခြင်းလုံးဝ မတူဘူးဗျ။ တင့်တယ်စွာ စည်ပင်လှုပ်ရှားနေပြီး၊ဝတ်ပြုသူတွေ မှ အများကြီး။ တာလီဘန် တွေ ရုပ်ပွါးတော် ဖျက်စီးတုန်းက ရှိသမျှမွတ်စလင် နိုင်ငံ အားလုံးနီးပါး က ကန့်ကွက်တယ်။ မွတ်စလင် ဗလီတွေ ခရစ်ယျာန်ဘုရားကျောင်းတွေ ဖျက်စီးခံရတော့ သက်ဆိုင်ရာ တရားခံတွေနဲ့ဘာသာတူသူတွေထဲမှာ ကန့်ကွက်ရှုံ့ချသူ ဦးရေ ဟာ လက်ချိုးရေတွက်လို့ရတယ်။ ရှင်းလား
[[“ရဲရင့်သစ္စာဟာ World Trade Center ကို စီစဉ်ခဲ့တဲ့ Khalid Sheikh Mohammed ကို အမေရိကန်တွေက ကြမ်းကြမ်းတန်းတန်း စစ်ဆေးတာကို ဝေဖန်သွားတယ်”]]
လို့ကို James Mmt က ရေးထားသေးတယ်။ ကျွန်တော် ဘယ်မှာ ဝေဖန်ထားလို့လဲဆိုတာ အထောက်အထားပြပါ။ “Khalid Sheikh Mohammed ကို အမေရိကန်တွေက Water Boarding Torture အပါအဝင် အမျိုးမျိုးနှိပ်စက်ပြီး မှ အဲဒီ အမှုကြီးကို plan လုပ်တယ်လို့ ဝန်ခံခဲ့တာ” ဆိုတဲ့ စကားက ဘယ်နားမှာ မှားနေလို့လဲခင်ဗျ။ Khalid Sheikh Mohammed ကို အမေရိကန်တွေက မနှိပ်စက်ဘဲ သူ့ဟာသူ ဝန်ခံခဲ့တာလား? သူ့ရဲ့ လုပ်ရပ်ကို ကျွန်တော် ရှုံ့ချထားတာ မမြင်ဘူးထင်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ လုပ်ရပ်ကို သူကိုယ်တိုင်မှားကြောင်း အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံသွားတဲ့အချက် ကို ကျွန်တော် က ဖော်ပြခဲ့တာပါ။ ဦးဘိုကျော်ငြိမ်း တောင် အဲလို မဖော်ပြခဲ့ပါဘူး။ ဒါနဲ့များ Khalid Sheikh Mohammed ရဲ့လုပ်ရပ် ကို ရဲရင့်သစ္စာ က မဝေဖန် ဘူးလို့ ကို James Mmt ပြောထွက်ဝံ့သေးတာ အံ့စရာဘဲ။
[[ “အခုလက်ရှိ ရခိုင်မှာ ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စတွေမှာ ဘယ်သူတွေ သွေးထိုးလို့ ဘယ်သူတွေ လုပ်တယ် ကိုယ်တယ်ဆိုတာ လယ်ပြင်မှာ ဆင်သွားသလို ထင်ထင်ရှားရှား မြင်လာရတယ်….”]]
[[“မှတ်ချက် ။ ။ ရဲရင့်သစ္စာ သိအောင် ပြောလိုက်ပါဦးမယ်…. ရဟန်းတွေသူတို့ကိုယ် သူတို့………”]]
ကို James Mmt ရေ။ ကျွန်တော့် ကို သိအောင်ပြောပြတဲ့စေတနာကိုတော့ အသိ အမှတ်ပြုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်ဖက်ကလည်း ကို James Mmt ကိုသိစေချင်တာ က ကမ္ဘာ့ဘာသာတရားတွေရဲ့ အဆုံးအမတွေ နဲ့ပတ်သက်ရင် “သိလှပါတယ်” ဆိုတဲ့ လူတွေထက် ကျွန်တော်သိတာ မလျော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဘာသာတရားတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အဆုံးအမတွေ ကို James Mmt ကျွန်တော့် ကို လာပြောပြနေရင် ကို James Mmt ရဲ့အချိန်တွေကုန်တာဘဲအဖတ်တင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါလေးကို အသိအာရုံထဲ စွဲစွဲမြဲမြဲ မှတ်ထားစေချင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က ကျွန်တော်က အဲဒီ ရဟန်းတွေသတ်သေတဲ့ အသုဘသမာပတ် တရားအကြောင်းအဖြစ်ကိုရေး တယ်ဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာကို ဝေဖန်တာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဦးဘိုကျော်ငြိမ်း အနေနဲ့ Absolutism တွေ Relativism တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အလွဲရေးထားတာကို ရှင်းပြရုံလေးပါ။ ဘာသာရေးဟာ “Human interpretation” ဘဲလို့ အလွဲရေးခဲ့တဲ့ ဦးဘိုကျော်ငြိမ်းအရေးအသားကို အထောက်အထားအခိုင်အမာနဲ့ rebut လုပ်ရုံပါ။ ဦးဘိုကျော်ငြိမ်းရဲ့ အတွေးအခေါ် Ideology မှားနေကြောင်းသက်သေပြတာပါ။ ဦးဘိုကျော်ငြိမ်းကို ဘာသာရေးနဲ့လည်း ကျွန်တော်မဆုံးမပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲ
This entry was posted on June 24, 2012 at 5:16 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “ကို James Mmt-အလွဲများစွာနဲ့အမြဲမမှားစေချင်ပါ”
June 24, 2012 at 5:40 am | Reply
Myint Myat Thu wrote in NLD FB aboutaCyber-trooper. ???JM
အရေးအသားတွေ ကောင်းလွန်းလို့ ရေးလိုက်တိုင်း Like …Like ….Like လုပ်နေကြတဲ့ နေပြည်တော် က အိုင်တီ ပညာရှင်ကြီးရေ .. ခင်ဗျားရေးတာတွေ ကို ဖတ်ကြည့်ယင်းနဲ့ စကားထဲက ဇာတိတွေပြလာတာတွေ့ရတယ်ဗျာ ….
စစ်တပ်ဆိုတာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွက် မရှိမဖြစ်ဆိုတဲ့ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုဆိုတာ လက်ခံပါတယ်….. တပ်မတော် အင်အားရှိမှ တိုင်းပြည် အင်အားရှိမည် ဆိုတာကိုလည်း သဘောတူပါတယ်….. မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိသမျှ တက္ကသိုလ်တွေရဲ့ ပညာရေး စနစ်ကို စနစ်တကျ ချေမှုန်းလို့ သာမန်ပြည်သူလူထုတွေ ပညာရေး သားကြော ဖြတ်ခံရချိန်မှာ စည်းချက်မှန်မှန်နဲ့ ချီတက်နေတဲ့ တပ်မတော် တက္ကသိုလ်က ကျောင်းဆင်းတွေ အပေါ်မှာ မနာလိုစိတ် မရှိတာလည်း အမှန်ဖြစ်ပါတယ်……
( မသိယင်လူတွေ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု တွေက စစ်တပ်ကျောင်းဆင်းတွေကို မနာလိုစိတ်ရှိနေသလိုလို )
( ပြောတဲ့ကောင် က စစ်တပ်က နဲ့တူတယ်နော် )
ပညာတတ် စစ်ဗိုလ်တွေ၊ နိုင်ငံခြား ပညာတော်သင် စစ်ဗိုလ်တွေ နိုင်ငံတော်ရဲ့ အရေးပါတဲ့ နေရာတွေမှာ ၀င်လာရင် Capacity ပြည့်ဝတဲ့အတွက် တိုင်းပြည်ကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ အကျိုးပြုမယ် ဆိုတာကိုလည်း ချွင်းချက်မရှိ ယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်…… ဒါပေမယ့် သာမာန် ပြည်သူလူထု ပညာရေး၊ စီးပွားရေး သားကြော ဖြတ်လိုက်တဲ့ အကျိုးဆက်ရဲ့ ရိုက်ခတ်မှုဟာ စစ်ဗိုလ်တွေကိုပါ ထိခိုက်သွားတာကို သတိ မထားမိလိုက်ဘူး…….
( စစ်ဗိုလ်တွေက နိုင်ငံတော်ရဲ့ အရေးပါတဲ့ နေရာတွေမှာ ၀င်လာရင် Capacity ပြည့်ဝတယ်ဆိုတော့ စစ်တပ်က မဟုတ်ယင် Capacity မပြည့်ဝဘူးလို့ ပြောတဲ့ ကောင် ဘယ်သူလဲ)
( စစ်ဗိုလ်တွေ စီးပွားရေး ထိခိုက်သွားမှာ စိုးရိမ်လွန်းနေတဲ့ ကောင် )
နိုင်ငံတော်မှာ အရေးပါတဲ့ နေရာကို ၀င်ယူမယ့် တပ်မတော်က အရာရှိလောင်းတွေမှ တစ်ချို့ဟာ ရုရှမှာ ပညာတော်သင် သွားနေချိန်မှာ အွန်လိုင်းကနေပီး နိုင်ငံရပ်ခြားက မိန်းကလေးတွေစီက ငွေကြေး ခြူယူတာမှသည် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် မြန်မာပြည် ပြန်ရောက်တာတောင် အဲ့ဒိ မိန်းကလေးတွေစီက ပိုက်ဆံလက်ဖြန့် တောင်းနေတဲ့အထိ စိတ်ဓါတ်တွေ အောက်တန်းကျမယ်လို့ မထင်ခဲ့မိတာတော့ အမှန်ပါ……. အဲ့ဒိလိုပါပဲ ရေ ကျတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို စစ်ဗိုလ် တစ်ယောက်ကနေ တစ်ယောက် လက်ဆင့်ကမ်းလို့ ပိုက်ဆံခြူယူတာမျိုး လုပ်မယ်လို့လည်း မထင်ခဲ့ရိုး အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်…. အဲ့ဒိလိုသော ငါးခုံးမ တစ်လှေကြီးကြောင့် ရုရှမှာ ပညာတော်သင် သွားနေတဲ့ အချို့ အချို့သော စစ်ဗိုလ်များလည်း သိမ်းကြုံး အပြစ်တင်ခံနေရတာ တွေ့နေရပါတယ်…..
( နိုင်ငံတော်မှာ အရေးပါတဲ့နေရာကို ရုရှ မှာ ပညာသွားသင်နေတဲ့ ခွေးလွေ ခွေးလွင့် တွေက ၀င်ယူမှာတဲ့လား )
(ခွေးလွေခွေးလွင့် တစ်ကောင် ရဲ့ ခွေးဇာတ်ခင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းကို ဘ၀တူ တခြား ခွေးတွေ ကို မကူးစက်စေချင်တဲ့ စေတနာမျိုးဆိုတာ ရေးတဲ့လူက ခွေးမျိုးဖြစ်လို့ စာနာတတ်တာနေမှာ ပေါ)
ဒါကို ပေါ့သေးသေး တွေးလို့ မရပါဘူး…. တစ်ချိန်မှာ နိုင်ငံတော်ရဲ့ အရေးပါတဲ့ တာဝန်တွေကို ၀င်ယူမည့် အရာရှိလောင်းတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို မထင်မှတ်ပဲ ဖျက်ဆီးခံရမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ကြောက်မက်ဖွယ် ခြ စားနေမှု တစ်ရပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်….. အဲ့ဒိလို လုပ်ရပ်ကို မှန်တယ်လို့ ယုံကြည်လက်ခံပီး ကမ္ဘာမီးလောင် သားကောင် ချ နင်းမှာပဲ ဆိုတဲ့ စကားကို လက်ကိုင်ထားနေတဲ့ ကင်ဆာဖြစ်နေတဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေကို ကုစားဖို့ လိုအပ်လာပါပီ….
(တစ်ချိန်မှာ နိုင်ငံတော် မှာ အရေးပါတဲ့ တာဝန်တွေကို ၀င်ယူမဲ့ အရာရှိလောင်းတွေလား ခွေးလွေခွေးလွင့်တွေလား ကြည့်လုပ်စမ်းပါကွာ)
အမြှီးကျက် အမြှီးစား ခေါင်းကျက် ခေါင်းစား စိတ်ဓါတ်ဟာ နိုင်ငံတော်ရဲ့ အရေးပါတဲ့ တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှာ နေရာဝင်ယူလာမယ့် အင်အားစုတွေမှာ ၀င်ရောက်နေတာ နိုင်ငံအတွက် အန္တရာယ် ကြီးမားတယ် ဆိုတာ အချိန်မီ တာဝန်ရှိသူတွေ သိရှိနိုင်ကြပြီး လိုအပ်တဲ့ ကုစားမှုတွေ မြန်မြန် ပြုလုပ်ဖို့ သင့်ပါပီ…. နောက်မို့ဆိုရင်ဖြင့် စိတ်ဓါတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကင်ဆာ ဖြစ်နေတဲ့ အလေ့အကျင့်တွေဟာ ရောဂါရင့်မှ ဆိုရင်တော့………..
(စေတနာ ဘယ်သူကိုထားနေတာလဲ ဘယ်သူ့ကို ကုခိုင်းနေတာလဲ တကယ်တန်းလုပ်ရမှာ က ခွေးဇာတ်ခင်းဖို့ လွှတ်လိုက်တဲ့ ရုရှက ခွေးအားလုံးကို ပြန်ခေါ်ပြီး နိုင်ငံတော် လုပ်ကြံမှုနဲ့ ဇက်ကြိုးတတ် ခုံရုံးတင်ရမှာ)
(ဖေ့ဘွတ်က နံမည်ကြီး ခွေးမျိုးခွေးနွယ် လူသတ်ကောင် တစ်ကောင်ရဲ့ အကြောင်း တစ်စိတ်တစ်ဒေသ သိအောင်ထုတ်ပြလိုက်တယ် ….. သိပ်အထင်ကြီးနေတဲ့သူတွေ သတိထားစေချင်တယ် )